Fashilka Ganasiga Maxaa Sababa - Xogside-news
Home BARNAAMIJYADA Fashilka Ganasiga Maxaa Sababa
Fashilka Ganasiga Maxaa Sababa
Shirkadaha dhaqaale ahaan burbura waxa sabab u ah marka shirkaddu ay curin kari weydo wax cusub iyo horumar dhinaca hawsheeda ah adeega ama badeecad. Taasi oo keenta inay bixin kari weydo kharashaadka hawsha lagu wado marka uu yaraado iibkeedu (Operating costs).
Fikradaha khaldan ee aan aqoonta ku fadhiyin ee maamulayaasha shirkadu rumaystaan ayaa ah arinka ugu horeeya ee baabiiya shirkada , taasi oo ah inay rumaystaan inay soo saaraan adeega ama badeecadda ugu tayo wanaagsan, qiimo ahaan ugu jaban baahina loo qabo. Waxaana ay isha ka laalinayaan tartamataasha oo ay ka soo qaadan kuwa aan gaadhayn heerka macmiil ay shirkadoodu kasbatay.
Si ay shirkadaadu horumar u samayso waa in maamulka shirkadu yeeshaa kuwo talada siiya iyo aqoonyahano khibarad u leh suuqa iyo isbedelka tartanka ka jira suuqa ama ku soo waajahn mustaqbalka. Go’aan qaadashada iyo aaminsanaanta inaad tahay shirkadda macmiil badan maaha mid ka badbaadinaysa gantaalaha burburka ee ay kugu soo ganayaan tartamayashaadu kuwaasi oo ku baraarugay marka horeba macaashka shirkadaada ee xooggan.
Previous articleDaraasad Cusub oo ka War bixinaysa Wadnaha iyo mihiimada uu u leeyahay Jidhka
Next articleShirkad ku taala Mexico oo Lafaha Iyo Dambaska Maydka ka Samaysa Maacuun